Warsangali (; ), (sidoo kale loo yaqaano Moorasaante/Awrkii Cirka, Warsengeli, Warsingeli, Oor Singally) waa qabiil kamid ah beelaha HARTI. ee beelwaynta Daaroodka, ee Dadka Soomaalida. Warsengalidu waxay deegaan ku yihiin wadanka Somaliland (gaar ahaan Bariga gobolka Sanaag). Dalka Soomaaliya waxay ka dagaan uu leeyihin shabeelaha dhexe,shabeelaha hoose,baay,bakool,gedo,jubada dhexe iyo jubada hoose, deegaano ka mid ah howdka; iyo Itoobiya (meelo ka mid ah deegaanka Ogaden). Warsengaligu wuxuu ka mid yahay beelaha Harti ee hoostaga Daaroodka. Deegaan ahaan, wuxuu Warsangeli soohdin qabiil la leeyahay Garxajis dhinaca galbeed, iyo Majerteen/Dishiishe/Kaptanle dhinaca bariga, iyo dhinaca koonfureed wuxuu Warsangeli soohdin la leeyahay reer darawiish. Siyaasad ahaan, wuxuu Warsangeli sii aad u la wadaaga qabiilka reer darawiish, tusaale ahaan, xiligaa kooxdii Xaashi.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Warsangali&oldid=214205"
Last edited on 5 Agoosto 2021, at 02:34
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Agoosto 2021, marka ee eheed 02:34.